250g,niova daholo ny mpitantana isakin ny vakim paritra ka nirindra tsara ny fizarana. Nisy ihany anefa ireo nampiditra antsokosoko ireo fianakaviana ary nasolony ireo tokony hahazo. Isakin ny talata sy alakmisy ny fizarana ka ny efa nahazo amin manaraka indray. Ny tsena mora dia ny alatsinainy,alarobia ary ny zoma. Atreto tsara vintana anosipatrana est,ouest.